Izindaba - Ngabe i-bone china tableware ilula kakhulu ukuyibamba?
IBrithani yasungula i-bone china tableware iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili. Ngemuva kwentuthuko eminingana yomhlaba, isibe ngesinye sezinhlobo zobumba ezihluke kakhulu emhlabeni. I-Bone china tableware ngokungangabazeki ilungele kakhulu ukuhlobisa itafula lomshado, ngoba amathambo aqinile futhi abushelelezi, ahambisana nomshado omsulwa, othembekile nothando. Njengoba ngaphezu kwengxenye eyodwa kwezintathu yomlotha wezilwane ezidla utshani ufakwa obumbeni, i-bone china iqanjwe ngobulukhuni bayo obukhethekile kanye ne-porcelain eguqukayo. Ngenqubo yokudubula eyingqayizivele, ukungcola okwengeziwe obumbeni kuyasuswa, okuholela ekutheni i-bone emhlophe i-china, intekenteke, ibonakale, ilula, inamaphutha amancane, futhi ibe mncane kune-porcelain, ngokubuka okukhethekile okuhlanzekile
umqondo. Ngaphezu kwalokho, amathambo nawo anzima kakhulu. Kuma-coasters amane wetiye lamathambo e-Rolls-Royce, lezi zinkomishi ezine zekristalu zisekela isisindo i-RV engaphunyuka kuso!
I-china emhlophe ethambile emhlophe ethambile ivame ukusetshenziselwa i-tableware yomshado yaseNtshonalanga. Kungumuzwa oyingqayizivele wemvelo wethambo lemvelo, elihambisana nembali enhle kanye ne-porcelain yezinyoni edwetshiwe noma ukuthungwa kwejika elihlukile, lihlale liyithebula elihle ngokukhethekile. Lapho i-tableware yethambo le-china namalaphu wembala akhanyayo noma acacile, ukukhanya kwamakhandlela okumsulwa nothando lwezimbali zetafula kufakwe iminonjana, kuvela etafuleni njengamathoni akhanyayo, imigqa kanokusho nokunambitheka okuhle. Lolu uhlobo olungenandaba futhi oluhle, oluyigugu, njengomshado wendabuko uqobo, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, ludinga ukuphathwa ngokucophelela nokuchuma.
Ukuthungwa kwethambo china kusezingeni eliphakeme. Uma kuqhathaniswa ne-porcelain yendabuko ejwayelekile, i-bone china inokukhanya okuhle kokukhanya, futhi ingaletha ukuthungwa okuhle, okukhanyayo nokuhlanzekile njenge-jade. Ngaphezu kwalokho, i-bone china inezici zepulasitiki ephezulu, ingenza umbala we-glaze ubushelelezi, upendwe ngombala, futhi uqinile futhi uhlale isikhathi eside. Izinsiza eziyinhloko: iqoqo lamathambo e-china tableware, amathambo china mugs; ilungele isixuku: iqoqo lamathambo e-tableware e-china alungele kakhulu ukuhlangana komndeni nabangane, umndeni wonke uphuza, futhi ungasetshenziswa njengezipho zomshado nokufudumala kwendlu kwezihlobo nabangane; Intengo yemakethe: iqoqo lamathambo e-china tableware yi-High-end tableware ngokuvamile inenani eliphakeme.
I-tableware enamaphethini wensimbi, njengokuhlelwa kwegolide, ukugoba kwesiliva, njll., Akunakubekwa ku-microwave; akunandaba ku-steamer.